Doorka Qurba Joogga Somaliland: Siyaasada, Dhaqaalaha Iyo Musuqmaasuqa | FooreNews
Home wararka Doorka Qurba Joogga Somaliland: Siyaasada, Dhaqaalaha Iyo Musuqmaasuqa
Doorka Qurba Joogga Somaliland: Siyaasada, Dhaqaalaha Iyo Musuqmaasuqa
Waxa qoraalkan aynnu ku soo qaadanaynaa tusaalooyin badan oo ku taxaluqa qurbajoogga, sida dunida ay ka yihiin iyo keena waxa ka dhaxeeya, waxaynu iftiiminaynaa shuruucda jinsiyadaha waddamada adduunyadda iyo siffaha ay ula macaamilaan muwaadiniinta labadda jinsiyadood sita, waxaynu sheegaynaa, doorka qurba jooggu ku leeyahay waddamadda ay asal ahaan ka soo jeedaan, dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, isdhexgalka iyo arimaha horumarkaba, qoraalkani wuxuu si wayn u soo bandhigayaa qiimaha qurba joogga reer Somaliland iyo doorkii lama ilaawaanka ahaa ee qurba joogu ku lahaa yagleelka qaranimada Somaliland, doorkooga dhaqaale iyo taakule ee eheladooda, miisaanka dhaqaale ee ay waddanka soo galiyaaan, sidoo kale waxaan ka madhnayn, doorka qurba joogu ku leeyahay, kala qaybinta bulshadda iyo qabyaaladaba, waxa sidoo kale aynu daaha ka faydi doonaa, heerka musuq maasuq ee masuuliyiinta qurba jooga ah iyo dhaqaalaha yare e waddanka oo aan awoodin in lacago baddan dibaddaha looga diro.
Qormaddan waxay dhiirigalinaysaa, dhalinyaradda reer Somaliland sidii ayna u tahriibi lahayn, waa qormo wacyi galin ah oo xukuumada, xisbiyo mucaarid iyo bulshadda qurba jooga ahba indha ugu furaysa, caqabadaha ragaadiyay dhalinyaradda.
Gunaanadkii qormaddani waxay soo jeedinaysaa tallo bixino, wax tar u ah in dib loo eeggo shuruucda waddanka sida:
Wax ka baddal iyo kaabid lagu sameeyo xeerka jinsiyadaha ee (Xeer Lr.22/2002).
In la dhaqan galiyo Xeerka kahortagga ku tagrifalka hantida qaranka & ladagaalanka musuq maasuqa Xeer No.38/007
In masuulka qurba jooga ah ee xil loo magacaabayaa daganaado 5 sano waddanka isaga iyo qoyskiisu, si ay xogogaal ugu noqdaan, heerka waxbarasho, caafimaad, dalxiis, nasasho iyo ciyaaraba.
Qeexidda macnaha ‘Diaspora’, Soomaali ahaana u adeegsano Qurbe joog, oo ah kalmad asal ahaan Giriig ah. Waa marka bulsho ka daaduunto ama ka barakacdo, waddankooddii hooyo, iyagoo magansanaya waddamo shisheeye. Waxa kale oo lagu macneeyaa bulsho kala filiqsan oo waddamo kala duwan ku nool oo leh hal waddan oo ay asal ahaan ka soo jeedaan.( Merriam Webster).
1648 heshiisyaddii loogu magaca daray ‘the peace of Westphalia’ oo ahaa heshiisyo lagu soo afjaray dagaalo soconayay 30 sanadood, una dhaxeeyay quwadaha reer galbeedka ayaa waddan kastaa ku aqoonsadday qaranimadda waddanka kale, mastaafurinta siyaasadeed oo lahayd taariikh fac wayn, ayaa iyaddoo heshiiskan laga faa’idaysanayo Waxa markii ugu horaysay la mastaafuriyay Publius Ovidius Naso oo ahaa gabayaa u dhashay Romania iyo Voltaire oo ahaa Faransiis loona mustaafuriyay Ingiriiska.
1921 aasaaskii ‘League of Nations’ ayaa lala yagleelay isku xidhka caalamiga ah ee arrimaha qaxootiga, Hayadda arrimaha qaxootiga ayaa u magacawday Fridtjof Nansen Madaxa hayadda, Waxa la faray inay la tacaalaan samatobixinta iyo caawinta 1500,000 oo qof oo ka soo cararay Russia Kacaankii 1917kii iyo dagaallo sokeeyo oo soconayay (1917-1921). 1923 Shaqadda Hayadda qaxootiga waa la balaadhiyay, waxa lagu soo daray in la qaabilo hal milyan (One Million), oo reer Armeniya ah oo ka soo yaacay qul qulatooyinkii iyo dagaaladdii turkeygu ka wadday halkaas.
1951kii ayaa la sameeyay Xeerka caalamiga ah ee qaxootiga loona yaqaan afka qalaad ( the UN convention on the rights of refugee ) Kaas oo damaanadd qaaddaya xuquuqda qaxootiga, iyo sifaha qaxootinimo loogu aqoonsanayo. Sida uu dhigayo qodobka 1aad Farqadiisa A.2 (Article1.A.2). Waxa isaguna kabaya kuna ladhan Xeerka xuquuqda aadamiga ee la sameeyay 1948kii (Universal Declaration of Human Rights), kaas oo aqoonsan xuquuqda dadka magangalyo doonka ah, ee ka soo cararay dalalkooda.
Noocyadda jinsiyadaha la bixiyo dunidda
Dhalashadda jinsiyadaha waxa lagu helaa laba nooc ama laba hab oo kala ah: (i) u dhalasho ama (ii) helid Jinsiyad.
2.1: U Dhalashada (by birth)
Waxaa jira laba hab oo lagu hello jinsiyaddaha u dhalashadda ah waxanay kala yihiin, (i) Jus Sanguinis , waa jinsiyadda u dhalashadda ah (ii) Jus Soli.Jinsiyada ku dhalashadda ah
2.1.1. Jinsiyadda u dhalashadda ah (Jus Sanguinis)
Jinsiyadda u dhalashadda ah, ama dhiig ahaan halka aad asal ahaan ka soo jeeddo, ilmuhu wuxuu hellaa jinsiyadda waalidkii, isagoon loo eegayn halka iyo goobta uu ku dhashay, tusaale, ilmo yar oo ay dhaleen waalid Hindi ahi, wuxuu ahaanayaa uun hindi caradda uu doono ha ku dhashee, habkani waa qadiimi inta baddana dunidda ayaa isticmaasha
Jinsiyada ku dhalashadda ah (Jus Soli )
Hab-dhaqankan lagu bixiyo jinsiyadda ku dhalashadda ah, muwaadinimada waxa lagu helaa, goobta aad ku dhalatay, maaha hab caan ah dunida marka aad eegto, waddamo kooban ayaa laga bixiyaa jinsiyada u dhalashadda ah, oo u baddan Europe iyo marykan, tusaale, Ilmo waalidkii yihiin soomaali ama ingiriis haddii uu ku dhasho maraykan wuxuu helayaa jinsiyadda marykan, marka la raacayo habkan ku dhalashadda ah.
2.2: Hab dabiici ah (Naturalization)
Dhalashada waxaa sidoo kale lagu heli karaa iyada oo loo marayo hab dabiici ah. Qof Qariib ahi wuu noqon kartaa muwaadin ka dib marka uu fulliyo shuruudaha qaarkood. In kastoo shuuruudahani ku kala duwan yihiin, gobol ka gobol, weli qaar ka mid ah mabaadiida guud oo lagu arkay waxaa laga yaabaa in iloo soo koobay sidan soo socota:
2.2.1. Daganaanshiyo (Residence)
Daganaanshiyaha muddo dheer aad dagan tahay waddan, waxay daruuri u tahay helidda muwaadinimadda adigoo qariib ah, wakhtiga daganaanshiyaha way ku kala duwan yihiin waddamadu. Ingiriiska Iyo maraykanka, xiligu waa 5 sanno, halka Faransiiska ay ka tahay 10 sanno
2.2.2. Dhaarta Daacad Noqoshada (Oath of Allegiance)
Qofka ajanabiga ahi, waa in in lagu dhaariyaa dhaarta daacad noqoshadda, ka hor inta uusan noqon muwaadin u dhashay wadan kale
2.2.3. Iibsigga Hanti Maguurto ah (Purchase of Real Estate)
Qofka ajanabiga ah ee maal gashadda ama ka iibsadda hanti ma guurto ah waddan kale, wuu heli karaa xuquuqda muwaadinimadda haddii uu doono
2.2.4. Guurka (Marriage)
Gabadhu waxay helaysaa jinsiyadda Ninkeedda, tusaale ahaan: – gabadha ingiriiska ahi waxay heli kartaa xuquuqda jinsiyadeed ee Hindiya haddii ay guursato nin reer hindiya ah, sidaa si lama mid ah gabadha ajanabiga ahi waxay helaysaa jinsiyadda Somaliland haddii ay guursato nin reer Somaliland ah
2.3: Muwaadiniinta labada jinsiyadood sita Maxaa ka reeban
Intabadan waddamada qaaradaha kala duwan ee aduunku, intoodda ogol labada jinsiyadood, waxa shuruucdooda ku qoran in aan muwaadinkaa laba jinsiyadood sita aan loo dhiibin, Xafiisyada dawlada ee muhiimka iyo waliba inaan la qori Karin Kuuliyadaha militariga, tiro aad u yar oo laga xusi karo Isreal ayaa ogol in muwaadinka isrealiyaanka ahi in isagoo jinsiyad kale sita hadana qaban karo xilwayn wadanka, waana arin inta badan aan ka suurto galin aduunyada kale, isreali nimadu waa waxayn dhexdooda, mana khiyaami karo waanay adagtahay inuu dano shisheeye u adeego isagoo xil waddankiisa u haya, markaad eegto taariikhiyana maaha dad lagu dayn karo ama lagu doodi karo in wadankaasi sidaa yeelo.
1. Qurba joogga Qaaradda Afrika Qurbo joogga afrikaanka ah ee ku kala filiqsan daafaha dunidda waxa lagu qiyaasaa 169 million, siduu bangigga adduunku sheegay warbixintiisii 2012 (world bank:2012), qurbo joogga waddamadda afrikaanku waxay door wayn ku leeyihiin horumarka qaaradda africa, Siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarka guud ahaan. Bal aynu daalacano Qurja joogga qaaradda afrika ee Waddamadda, Nigeria iyo Egypgt 3.1: Nigeria Waddanka Nigeria, waa waddanka ugu qurbojoogga baddan qaaradda afrika waxa lagu qiyaasaa in kabadan 17million oo Nigerian ahi ay yihiin qurbojoog ku kala filiqsan dacaladda dunidda, (World Bank: 2012). qulqulka aqoonyahanka, dhalinyaradda,waxgaraddka iyo hormoodka bulshada oo ay sabab u tahay, siyaasad xumo iyo xukuno macangag ahi, oo shacabka dhaxalsiiyay, duruufo nololeed oo xun, fursad la’aan, musuq maasuq, dhaqaale xumo, caddaalad daro iyo collaaddo sokeeye. 2012kii Wax soo saarka iyo dakhliga waddanka soo galay ee loo yaqaano ( Gross National Product GNP) boqolkiiba toban 10% ayaa laga helay qurbojoogga Nigeria oo xawilaadaha la soo dhigay oo u dhigmaysay 21 billion oo dollar. (World Bank: 2012). 3.1.1.: Doorka siyaasadeed ee qurba joogga Nigeria Qurbajoogga Nigeria si dadban iyo si toos ah ayay saamayn ugu leeyihiin siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaas, Sharcigga jinsiyadaha Nayjeeriya wuxuu ogolyahay in muwaadinku yeelan karo laba dalasho (dual citizenship), balse Muddo dheer waxa siyaasadda ku soo botorinayay qurbajoogga, waxay taasi horseeday dhacdooyin soo dadajiyay in siyaasadda Waddanka Nigeria laga xakameeyo qurbojooga, waxana ka mid ahaa dhacdooyinkaas:- 1. Musuq maasuq baahsan oo ay khayraadkii waddanka kaga gateen guryo waddamadii ay dhalashooyinkooda sitteen. 2-Waxa sare u kacay, qulqulka dhalinyaradda iyo aqoonyahanka, iyadoo qurbojoogga ku soo fatahay waddanka, ee misana boobay hantidii qaranku ay dhiirigalisay tahriibka. 3-Hoos-udhac wayn oo dhaqaale oo waddankii soo foodsaaray iyo dagaalo salka ku haya kala jiidasho khayraadkii waddanka ah. 4- Waxa khilaaf iyo kala qaybsanaan wayni ku dhex timid qurbojoogii Nigeria. 3.2: Egypt Waddankan masar oo ah waddan xadaaradd waawayn oo qadiimi ah leh, kana mid ah waddamadda ugu dadka baddan qaaradda Africa, tiradda qurbajoogta reer masar ee ku kala quban daafaha dunidda waxa lagu qiyaasaa 2.7 Million masaari ah, waa waddan waxsoor baddan leh. (World Bank: 2009) 2009kii, sidda laga soo xigtay bangiga aduunka, Masar waxay noqotay waddankii ugu baddnaa barigga dhexe oo dhan, ee hela qaadhaanka qurbo joogaa (remittances), xaddi lagu qiyaasay $7.8bn, waana boqolkiiba 5% dakhaliga dhaqaale ee waddanka soo gala. Waddanka oo leh wax soosaar, hormarna ka gaadhay dhinaca ciidamadda iyo warshadaha. (World Bank: 2009) 3.2.1 Doorka siyaasadeed ee qurbajoogga Masar Qurba joogga waddanka masar waxa lagu tirayaa, qurba joogyadda ugu xirfadaha baddan, ee aqoon iyo kartiba leh, sumcadna ku dhax leh waddamadda ay ku nool yihiin. Taariikhda masaariddu waxay ku abtirsataa, xukun milatari iyo afganbiyo siyaasaddeed. Inta badan waxa maamulayay ciidamo, sharcigga jinsiyadaha waddankaas ayaa ogol, in muwaadinku yeelan karo laba sharci (dual citizen ship), sharcigu wuxu kaloo dhigayaa, in qofka haysta laba sharci, ay mamnuuc ka tahay in uu ka mid noqdo ciidamadda, ama la qoro kuuliyadaha ciidamadda, ama uu isku soo taago doorasho baarlamaan. Waxay ka hortagaysaa, in la dhiirigaliyo tahriibka, boobka hantidda qaranka iyo inay tartan u soo galaan qurbajoogu kala hororsashadda xilalka dawladda.
2. Qurba joogga Qarradda Aasiya 4.1: Hindiya Waddanka Hindiya waa waddan baaxad ahaan, dad ahaa, aqoon ahaan, tiknoolajiyad ahaan, iyo wax soosaar ahaanba ah waddamada ugu horumarsan qaaradda aasiya, tiradda qorbajoogga hindiyaa waxa lagu qiyaasaa ,28,455,026 (Siddeed iyo labaatan million, afarboqol iyo shan iyo kontonkun iyo lix iyo labatan), Qorba joogga hindiya waa kuwa ugu muuqa dheera waddamada ay dageen, lana fal galay, horumar baaxadlehna ka sameeyay, Waddanka hindiya oo ah dal dimuquraadi ah, wuxuu dhiirigalin, taageero iyo soo dhawayn u sameeyaa qurbajoogiisa asal ahaan ka soo jeedda waddankiisa, Waxay u abuureen komishan arimaha qurba joogga qaabilsan. Si loogu dhiiri galiyo soo dhawyantooda iyo maalgashigoodaba 4.1.1: Doorka siyaasadeed ee qurba joogga India Waddankan hindiya, waa mid ka mid ah , waddamadda ugu horeeya aduunyadda ee hella lacagaha, qurba joogga ee ugu baddan, 2013kii waxa waddanka hindiya qurbajooggu u soo direen $70 bilyan oo dollar, waa xaddi lacageed oo tiro baddan, kana noqonaysa dakhligga guud ee waddanka …. La Soco
Previous PostNinkii Gawraca Dadka U Qaabilsanaa Daacish Oo Soomaaliya Usoo Guuraya Kuna Biiraya Al-shabaab Iyo Walaaca Masuuliyiinta Maamulada Soomaaliya Next PostXukuumadda Oo Shalay Shir Qarsoodi Ah Haamihii Shidaalka Qalinka Ugu Duugtay Shirkado Gaar Loo Leeyahay, Shaqo Joojin Shaqaaluhu Sameeyeen Iyo Murankii Oo Soo Laba Kacleeyay Bebera